***ဆရာမရယ်*** – Grab Love Story
ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်။ ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တော့ဆရာမရဲ့ဖြူဝင်းနေတဲ့ခြေသလုံးလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရသည်. .။ ဆရာမဝိုင်းစက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေ.. နှာတန်လှလှလေး. .နှုတ်ခမ်းပြဲပြဲဖူးဖူးလေး.. တွေဟာသူ့ရင်ကို တအားလှုပ်ရှားယစ်မူးစေသည်လို့ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ထင်သည်. .။
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ကျောင်းဆရာမမလုပ်ဘဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးလုပ်ဖို့ကောင်းသည် လို့ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ထင်သည်. . ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သူတို့ကျောင်းကိုရောက်လာတာ မကြာသေး။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ရုပ်ကချောသည်. . ။ကိုယ်လုံးကတောင့်သည်. .။ အသားအရေလှသည်။အသံလေးကချိုသည်။ဘာလိုသေးလဲဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ရယ်..။ . . ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သူ့ကျောင်းကိုစ..ရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီး..နေ့တိုင်း သူမရဲ့အလှအပတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နေသူဖြစ်သည်. . ။
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ကိုသူ.. သဘောကျနေသည်ဆိုပါတော့. .။ ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်လိုဘဲဆရာမချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသူတယောက် ရှိနေသည်. . ။သူကတော့ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်အတန်းပိုင်ဆရာမလုပ်ရတဲ့ဆယ်တန်း အေအတန်းကကျောင်းသားပေါ်ဦးထွန်းပါဘဲ. .။
လို့တပြိုင်နက်အော်နုတ်ဆက် လိုက်တဲ့အချိန်ကထဲကဆရာမကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်. . ။ဆရာမအတန်းထဲကို လမ်းလျောက်ဝင်လာတာမော်ဒယ်လ်တယောက်လိုဘဲလို့သူထင်သည်. . ။အထူးသဖြင့်ဆရာမ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ရဲ့.. တင်သားစိုင်တွေက
အရမ်းလှသည်လို့ပေါ်ဦးထွန်းထင်သည်. . ။
ဆရာမတင်တွေလှုပ်ခါတာကဗရမ်းဗတာလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး..။ မသိမသာလေးလှုပ်တာ. . ခါတာ. .။ ဆရာမဒီကျောင်းကို. ရောက်လာတာမကြာသေး. . . ဆရာမစရောက်တဲ့နေ့ကထဲက ပေါ်ဦးထွန်းဆရာမကိုသဘောကျ. ကာဆရာမတကိုယ်လုံးကိုသူကြည့်မိသည်။အို. .ဆရာမ ရယ်. . လှတယ်ဗျာ. . ဆရာမရဲ့နို့တွေကတင်းမာဖွံ့ဖြိုးလှသည်.. ။ဘော်လီနဲ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီ ၀တ်ထားတာတောင်ဆရာမရဲ့နို့တွေကတွဲမကျဘဲ.. တင်းထောင်နေတယ်ဆိုတာမိန်းမအတွေ့အကြုံ ရှိကြသောပေါ်ဦးထွန်းနဲ့သောင်းထိုက်ဟန်တို့သိကြပေသည်.. ။
( ပေါ်ဦးထွန်း. . မင်းကံကြီးထိုက်မဲ့ကောင်. .ဆရာ ဆိုတာမပြစ်မှားကောင်းဘူး. . မင်းတော့မိုးကြိုးအပစ်ခံရတော့မယ်. .)
( ဆရာမကိုကြိုက်မိလို့.. မိုးကြိုးပစ်ခံရမယ်ဆိုလဲပစ်ပစေတော့ကွာ. . ခိုက်နေကြိုက်နေပြီ. .)
ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သတိထားမိပါသည် . . ။အရပ်မြင့်မြင့်ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ကောင်လေးတယောက်ပါ. . ။သူမသာဆရာမ တယောက်မဟုတ်ရင်ဒီလိုကောင်လေးနဲ့ရင်ခုန်စရာဇာတ်လမ်းတပုဒ်လုပ်ရရင်လဲအကောင်းသား …။ အခုတော့သူမသည်ဆရာမတယောက်လေ. ။သိက္ခာကိုထိန်းရမည်. . ။
သူမရဲ့ဆရာမဂုဏ်ပုဒ်ကြောင့်အရှေ့ကဒေါ်တပ်ခေါ်ရပေမဲ့ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် သည်အသက်၂၀ကျော်အရွယ်ကျောင်းဆင်းခါစချောမောနုဖတ်နေဆဲမိန်းမတယောက်ပါ. .။ သူမလို..ရုပ်ရော.. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော….. ထင်းနေ၀င်းနေသော…..မိန်းမ တယောက်ပိုဆန့်ကျင်ဘက်. လိင်. ယောင်္ကျားသားတွေသဘောကျစ်ိတ်ဝင်စားကြတာဟာသူမ အတွက်အဆန်းတော့မဟုတ်. . ။သူမအပျိုဖေါ်ဝင်တယ်ဆိုကတည်းကကြိုက်သူလိုက်သူဝိုင်းဝိုင်း လည်ခဲ့တာဘဲ။
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားကသူမ ရင်တွေတင်တွေကိုစူးစူးဝါးဝါးစူးစိုက်ကြည့်တာများသတိထားမိပါသည်. . ။ဒီတင်တွေရင်တွေ ကြောင့်လဲခက်သည်. . ။ရှေးဘဝပေးကုသိုလ်လို့ဘဲပြောမလား..သူမရဲ့ကိုယ်..အစိတ်အပိုင်းတွေ ကလေ့ကျင့်ခန်းသိပ်မလုပ်ရဘဲလှနေသည်. . ။အချိုးကျသည်. . ။ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့..ကောင်လေး ကလဲလူချောလေးပါဘဲ. .။
သူမကိုသဲသဲမဲမဲစိတ်ဝင်စားနေသူနောက်တဦးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကိုလဲ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သတိထားမိသည်။..ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်အရပ်မြင့်မြင့်..ပိန်ပိန်ပါးပါး..တရုတ်.. ကပြားတယောက်ဖြစ်သည်.. ။အခွင့်အခါသင့်တိုင်းဒီဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်သူမကို ချဉ်းကပ်ပြီးစကားပြောလေ့ရှိသည်.. ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်အခုလိုသူမကိုစိတ်ဝင်စား နေကြသူတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူမကျောင်းသွားပြီးဆရာမလုပ်ရတာပိုပြီးပျော်နေသလို ခံစားရသည်။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေတာကဒီပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ဦးသိန်းထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ဆရာတို့သည်သူမသည်အပျိုစစ်စစ်တယောက် မဟုတ်ဘဲယောက်ျားနဲ့အိပ်ပြီးသား. .( လိုးပြီးသား. .) အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုတာကိုများသိကြရင် အခုလိုအသဲအသန်ဖြစ်နေပါ့မလား. . ဆိုတာကိုပါဘဲ. . ။
ယောင်္ကျားတွေကအပျိုစစ်စစ်မှ ကြိုက်ကြသည်ဆိုတာသူမသိသည်. .။ ဟုတ်ပါသည်. . ။ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ယောင်္ကျားတယောက်နဲ့လိုးဘူးပြီးသားပါ.. ။ ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာကထဲကအပျိုရည်ပျက်ခဲ့သော(ပါကင်ပွင့်ခဲ့သော) မိန်းမတယောက်ပါ.. ။ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀ မှာသူများတွေလိုဘဲရေကူးသင်လိုတာကြောင့် မိဘတွေကိုပူဆာခဲ့တော့မိဘတွေကကျောင်းကဖွင့်သောရေကူးသင်တန်းမှာမသင်စေဘဲအထူး သီးသန့်သင်စေချင်တာနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့သားဖြစ်တဲ့( ၀သုန်) နဲ့သင်စေသည်..။
( ၀သုန်) သည်ရေကူးချံပီယံတယောက်ဖြစ်သည်. . ။အမြဲရေကူး လေ့ကျင့်နေသူမို့ချပ်ရပ်တောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်တယောက်လဲဖြစ်သည်. .။ မိန်းကလေးတွေမျက်စိကျရင်ခုန်တာခံရတဲ့( ၀သုန်) ကိုချစ်ချစ်ကျော်မြင့်လဲရင်ခုန်မူးယစ် ခဲ့ရပေသည်. .။ ၀သုန်ကလဲချစ်ချစ်ကျော်မြင့်လိုချောလှတောင့်တင်းတဲ့နုနထွတ်ထွတ်ကောင်မလေးကို သဘောကျတာပေါ့. . ။ရေကူးသင်တယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာကိုင်ပေးရသည်. . ။ကူပေးရသည်. .။ နီးစပ်တော့အိုးချင်းထား. . အိုးချင်းထိ. . ကြိုးချင်းထား. . ကြိုးချင်းညိဆိုသလိုဝသုန်နဲ့ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် တို့ထိကြ.. ညိကြလေသည်. . ။
လူမရှိတော့တဲ့ညနေပိုင်းမှာသီးသန့်သင်တာမို့ဝသုန်နဲ့ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည် အ၀တ်လဲတဲ့အခန်းမှာဘဲအနမ်းတွေဖလှယ်ကြရင်းကရှေ့ဆက်တိုးကြသည်. . ။ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် လဲအဖိုဆိုလို့ယင်ဖိုတောင်မသန်းဘူးဘူး.. တဲ့အပျိုပေါက်မလေးဆိုတော့ဝသုန်ကသူ့ လက်မောင်းလေးကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်တာနဲကသူမပိပိကအရေတွေကဖြန်းကနဲ..စိုတက်လာရတယ်လေ . . ။၀သုန်ကသူမရဲ့ဖေါင်းကြွအိနေတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းစုတ်လာတော့ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်မှာ တကိုယ်လုံးနတ်ပူးသလိုတဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီ.. ။
ပိပိကအရေတွေကစိုရုံမကရွှဲနေတော့.. အထာသိသောဝသုန်သည်ကာမခလုပ်တွေကို တခုပြီးတခုဆက်တိုက်နှိပ်တော့ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်အချစ်ဖျားဒီဂရီသည်၁၀၈ မကတော့. .။ ပေါင်တန်တွေသည်အလိုလိုကားပေးမိရပြီ. . ။သူမရဲ့အပျိုစင်ပန်းကလေးကိုကိုကိုဝသုန်လိုရာ သုံးစေဆိုပြီး. . ထိုးပေးမိပါတော့သည်. .။ အရပ်မြင့်မြင့်ကိုယ်လုံးချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကြည့်ကောင်းသောဝသုန်နဲ့ချောပြီး တောင့်သောချစ်ချစ်ကျော်မြင့်တို့ချစ်တလင်းခေါ်သည့်မြင်ကွင်းသည်အင်မတန်မှကြည့်ကောင်းသော အပြာဇာတ်ကားတကားလိုပါဘဲ. . ။
ဘဲဒီမှာတင်ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့. . ၀သုန်သည်သူ့ဒေါ်လေး ရှိရာသြစတြေလျားနိုင်ငံကိုထွက်သွားလိုက်ရလို့ပါဘဲ.. ။ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်အဖို့.. ကာမအရသာကို သိမယ်မှမကြံသေးရပ်တန့်ခဲ့ရလို့ချစ်သူဝသုန်နဲ့ကာမစပ်ရှက်ကြတာကိုပြန်လည်သတိရ. တိုင်း.. ကာမစိတ်တွေနိုးကြားဖေါက်ပြန်ပြီး. .ကာမဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်..တနည်းဆိုသော် ခံချင်ကုန်းချင်စိတ်) တွေအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိခဲ့ပါသည်. . ။
သည်လိုဖြစ်ပေါ်သောအခါမှာ ချစ်သူဝသုန်ကလဲမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနေတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာဆိုတော့. . မိမိရဲ့ ကုတင်ဘောင်မှာခွထိုင်ပြီးထမိန်ပေါ်ကဘဲလွှတိုက်သလိုကုတင်ဘောင်စောင်းနဲ့ပွတ်တိုက်ကာ အာသာဖြေမိရသည်. . ။သူမပိပိကတအားစိုရွှဲနေတာမို့ဖိဖိပွတ်ရင်း. . ကာမအထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိရလေသည်.. ။. ကောလိပ်ကျောင်းရောက်တော့ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ကိုကြိုက်သူ လိုက်သူတွေအလွန်များပြားခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူဝသုန့်ကိုသစ္စာမဖေါက်လိုတာကြောင့်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် ဘယ်သူ့ကိုမှလက်မခံခဲ့. . ။
ပြင်းပြတဲ့ကာမဆန္ဒတွေဖြစ်လာရင်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ရေချိုးရင်း သူမပိပိကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ဖိကာပွတ်ပြီးအာသာဖြေတဲ့အကျင့်ရနေတာကြာပြီ..။ သွေးသားဆူဖြိုးတဲကအရွယ်မို့ခဏခဏဘဲပိပိကယားတတ်သည်. . ။ပိပိကို..ယောက်ျားလီးချောင်းနဲ့ လိုးဆောင့်ပေးတာခံချင်တဲ့စိတ်တွေမကြာခဏပေါ်ပေါက်ရသည်.. ။
ဒါကြောင့်သူမတောင်မိန်းကလေးဖြစ်ရက်နဲ့ဒီလောက်လိုလားတောင့်တပြီး . . ယောက်ျားတွေကိုစိတ်နဲ့မှန်းကာ. . သူ့လီးကဘယ်လိုပုံဖြစ်မလဲရှည်မလား..သေးမလား . . စသဖြင့်စဉ်းစားမှန်းဆလေ့ရှိတာကြောင့်သူတို့ယောင်္ကျားတွေလဲသူမရင်တွေတင်တွေ ကိုတပ်မက်စွာနဲ့စူးစိုက်ကြည့်ကြတာ.. မှန်းကြတာကိုကိုယ်ချင်းစာ.. သဘောပေါက်လေသည်. .။ ဘွဲ့ရပြီးကျောင်းဆရာမတောင်ဖြစ်လာပြီ.. ။သူမရဲ့ချစ်သူဝသုန်ကတော့ မြန်မာပြည်ကိုအလည်အပတ်တောင်ပြန်ရောက်မလာခဲ့ပေ. .။
ကျောင်းကိုစောစောရောက်သည်. . ။ဆရာမ များနားနေခန်းကိုလျောက်ခဲ့သည်. . ။တွေ့ပြီ. . ။ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေး. . ။သူ့ကို တွေ့ချင်နေတာနဲ့အတော်ဘဲ. . ။
( ပေါ်ဦးထွန်း. .)
( ဗျာ.. ဆရာမ. .)
( ဆရာမမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်. . ဆရာမနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ကွာ. .)
( ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ. .)
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ရှေ့မှဦးဆောင်ပြီးဆရာမတွေနားနေခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့သည်. .။ သေချာသည်. . ။ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးသည်သူမဖင်တွေကိုတပ်မက်စွာနဲ့ ကြည့်နေမှာဘဲ။ဆရာမတွေထိုင်တဲ့စားပွဲရှည်ကြီးဆီရောက်တော့သူမခြင်းလေးကို စားပွဲပေါ်တင်ရင်း. . ပေါ်ဦးထွန်းဖက်ကိုလှည့်ကာ. .
( မင်းဖေဖေနဲ့မေမေကဆရာမရဲ့မိဘတွေ နဲ့ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေ. . မင်းကိုဆရာမကကျူရှင်သင်စေချင်ကြတယ်. . မင်းကိုရောမင်း ဖေဖေနဲ့မေမေကပြောသလား. .)
( ပြောပါတယ်. . ဆရာမ. .)
( ကောင်းပြီလေ. . ကျောင်းကအပြန်နေ့လည်ပိုင်းမှာဆရာမမင်းတို့အိမ်ကိုလိုက်ပြီး သင်မယ်.. တချို့နေ့တွေမှာတော့ဆရာမအိမ်ကိုမင်းလိုက်ပြီးသင်ပေါ့. . ဖြစ်တယ်မှုတ်လား. )
( ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ. .)
( ကဲဒါပါဘဲ. . မင်းသွားနိုင်ပြီ. .)
( ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ. . )
ပေါ်ဦးထွန်းသည်မိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးကြောင့်သူသဘောကျသောဆရာမနဲ့.. ကျောင်းမှာတင်မကသူ့အိမ်မှာပါနီးနီးကပ်ကပ်နေခွင့်ရသွားလေပြီ. . ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်နဲ့ အခုလိုစာသင်နိုင်ဖို့ပေါ်ဦးထွန်းသည်သူ့အဖေနဲ့အမေကိုအရမ်းပူဆာခဲ့သည်. .။
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲအခန်းတခုထဲစာသင်ရသည်မှာ ပေါ်ဦးထွန်းအတွက်ရင်ခုန်မူးယစ်စရာပါ. . ။ဆရာမရဲ့အလှအပတွေကိုလဲအနီးကပ် ရှုစားခွင့်၇တာကြောင့်ပေါ်ဦးသက်သည်ဆရာမနဲ့စာသင်တိုင်းဖွားဖက်တော်ကခေါင်းထောင်ထ သည်. . ။တချို့ရက်တွေမှာတော့ဆရာမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးသင်ရသည်. .။ ဆရာမရဲ့အိမ်မှာလိုက်သင်ရတာကိုသူပိုပြီးသဘောကျသည်. . ။
ဆရာမ အိမ်မှာကဆရာမကသူ့အိမ်မို့အ၀တ်အစားလဲတတ်သည်. . ။အိမ်နေရင်းအ၀တ်အစားနဲ့ ဆရာမသည်ပိုကြည့်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်. . ။တခါတရံအလွန်ပါးလွှာတဲ့ပိတ်သားတွေ ၀တ်လို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့နို့လုံးထွားထွားတွေကိုသိသိသာသာကြီးသူမြင်ရလို့ပါ. . ။
နောက်ပြီး . . ဆရာမသည်သူ့အိမ်မှာမို့
( သိပ်ပူတာဘဲကွာ. . ဆရာမရေခဏချိုးလိုက်အုံးမယ်. .)
ဆိုပြီး ရေသွားချိုးတတ်သည်. . ။
ပေါ်ဦးထွန်းသည်ဆရာမရေသွားချိုးရင်. . ဒီအချိန်ဆိုရင်ဆရာမတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာအ၀တ်မပါဘဲအရမ်းလှနေမှာဘဲဆိုပြီး. . ဆရာမရဲ့ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်တွေကို. .. အလွန်ဘဲမြင်တွေ့ချင်မိရပေသည်. . ။ ပေါ်ဦးထွန်းလဲဆရာမရေချိုးတဲ့ရေချိုးခန်းကိုချောင်းကြည့်ဖို့ကြိုးစားသည်. .။
ရေချိုးခန်းထဲကိုချောင်းလို့ရမဲ့အပေါက်ရှာသည်. . ။ရေချိုးခန်းရဲ့ဘေးမှာဆန်အိတ်တွေ လှောင်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိသည်. . ။ပေါ်ဦးထွန်းသည်အခန်းလေးထဲကနေပြီးဆရာမကို ချောင်းလေပြီ။သေးငယ်သောသံရိုက်ရာအပေါက်ငယ်တခုတွေ့လို့ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမကိုကိုယ်တုံးလုံးကြီးဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရပြီ. .။
ဖြူဖွေးသောအသားအရေနဲ့တောင့်တင်းလှသောကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ် ကျော်မြင့်သည်အ၀တ်နဲ့တောင်အလွန်ကြည့်ကောင်းခဲ့တော့အ၀တ်မပါဘဲနဲ့ဆိုတော့.. အိုး. . အရမ်းကိုဘဲကြည့်ကောင်းလှသည်. . ။ ဆရာမရဲ့ပေါင်ကြားကဖေါင်းဖေါင်း.. မို့မို့မိန်းမအင်္ဂါစပ်ကြီးကအထူးရှယ်ဘဲ. . ။
တခါမှ ဒီလောက်လှတဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဆရာမသည်အမွှေးရိပ်ထားသလား . . နုတ်ထားသလားမသိဘူး. . ။ပြောင်ရှင်းကာဖေါင်းအိတင်းနေသည်. . ။အကွဲကြောင်းနီညိုညိုကြီး ကအသားဖွေးဖွေးကြောင့်သိသိသာသာကြီးထင်းနေသည်. . ။ ဆရာမရဲ့နှိုကြီးတွေကလဲတွဲမကျသေး. . ။ကော့ထောင်တင်းမာလှသည်. . ။စို့ချင်လိုက်တာဆရာမ ရယ်. . . . ။ ဖင်ကြီးတွေကလဲရှယ်ဘဲ. . ။သိပ်ကြီးမားတဲ့အိုးမဟုတ်ပေမဲ့အချိုးကျလှပတဲ့ဖင်တုံးတွေကလဲ တပ်မက်စရာကောင်းလှသည်. . ။
အတင်းပြေးဝင်ပြီးဆရာမကိုတက်လိုးပစ်ချင်စရာကောင်းနေ သည်။ဆရာမကိုချောင်းရင်း. . သူသည်သူ့လိင်တန်ကြီးကိုကွင်းတိုက်လေသည်. . ။ တရက်ပြီးတရက်ဆရာမနဲ့အတူစာသင်ရင်း. . ဆရာမနဲ့သူပိုပြီးရင်းနှီးနီးကပ်လာသည်. . ။ဆရာမနဲ့သူခေါက်ဆွဲဆိုင်တို့လဘက်ရည်ဆိုင်တို့မှာအတူတူထိုင်ကာစားသောက် နိုင်လာလို့ပေါ်ဦးထွန်းအရမ်းဘဲကျေနပ်နေသည်. .။
ဆရာမရဲ့ရက်ရက်စက်စက်လှသောကိုယ်လုံးတွေကိုသူနီးနီးကပ်ကပ်ကပ်နီးစပ်နေရတာ အသဲတွေယားနေရသည်. .။ ဒီနေ့လဲသူသည်ဆရာမအိမ်မှာလိုက်သင်ရသည်. .။ ပူအိုက်လွန်းတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပြီးဆရာမအိမ်ကအဲကွန်းလဲမရှိ. . ။ဆရာမသည်ချွေးတလုံးလုံး နဲ့.. ဖြစ်နေလို့. .
( ပေါ်ဦးထွန်း. . ဆရာမရေသွားချိုးလိုက်အုံးမယ်ကွာ. . ခဏစာလုပ်နေအုံး. .)
ဆိုပြီး အထဲကိုဝင်သွားသည်. . ။
သူခြေဖေါ့နင်းပြီးဆရာမ၀င်သွားတဲ့အိပ်ခန်းထဲကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ. ဆိုပြီး. . ချောင်းကြည့်ဖို့ကြံစည်လေသည်. . ။ အာ. . ဆရာမအခန်းတံခါးကိုစေ့ရုံစေ့ထားတာ. . သူအသာလေးတွန်းဟလိုက်ပြီးအတွင်းကို. ချောင်းလိုက်ပါသည်. .။ ဆရာမသည်အ၀တ်တွေအားလုံးကိုတလွှာပြီးတလွှာချွတ်ပစ်နေသည်. .။
အို. . ဆရာမရယ်. .. လှလိုက်တာဆရာမရယ်. .. ဆရာမရဲ့နို့သီးနီနီလေးတွေဟာထောင်နေကြသလိုဘဲ. .။ စို့ချင်လိုက်တာ. .။ ဆရာမသည်တန်းပေါ်ကမျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုဆွဲယူကာရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်သွားသည်. .။ ဆရာမရေချိုးနေတာကိုသူချောင်းနေသည်. . ။သူ့ရဲ့လိင်တန်ကြီးသည်အလွန်တင်းမာပြီး. မတ်မတ်ကြီးတောင်နေသည်. . ။ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်ပြီးလိင်တန်ကိုဆုတ်ကိုင်ထားနေမိသည်. .။
ဆရာမကိုယ်လုံးသည်ရေစိုနေလို့ပြောင်လက်နေသည်. . ။ဆရာမဆပ်ပြာတိုက်နေတော့ဆရာမ ကိုယ်လုံးတွေလှုပ်ခါနေကြသည်. . ။ဆရာမဖင်ဖြူဖြူတွေတဆတ်ဆတ်ခါနေကြသည်. .။ နို့ကြီးတွေလှုပ်နေကြသည်. .။ သူသည်ဆရာမရဲ့အ၀တ်မဲ့ကိုယ်ကိုကြည့်ရင်းလက်ဖြင့်ကွင်းတိုက်နေမိသည်. .။ သည်တုံးမှာသူသည်လေးဘက်ထောက်ခါချောင်းနေရတာမို့ကြာလာတော့ခြေထောက်ကျင်ပြီး ဘေးကိုချော်ယိုင်သွားရာဘေးကဆန်အိတ်တွေကိုသူ့ပုခုံးနဲ့တိုက်မိသည်.. ။
ဆန်အိတ်တွေ ပြိုကျသည်. .။
သူချောင်းနေတဲ့အခန်းတံခါးပွင့်လာပြီးသူ့ကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်နေသောဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့သည်. .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ထမိန်ကိုရင်လျားထားသည်. .။ကမန်းကတန်း ပြေးထွက်လာတာမို့သူမဆံပင်တွေရောကိုယ်တွေရောရေစိုနေသည်. .။ ပေါ်ဦးထွန်းသည်ကွင်းတိုက်နေတာမို့သူ့ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာအ၀တ်မရှိ. .။ လိင်တန်ကြီးကိုဆုတ်ကိုင်ရက်ကြီးဆရာမမြင်သွားသည်. . ။လိင်တန်ကြီးကလဲအရမ်းကို တောင်နေတာ. .။
( ပေါ်ဦးထွန်း. . .)
( ဗျာ. .)
( ထစမ်း. .)
ပေါ်ဦးထွန်းထရပ်သည်. . ။လိင်တန်ကြီးကတော့မတ်မတ်တောင်နေဆဲ. .။
( မင်း. . ဆရာမကိုဘာ.. လို့ချောင်းနေတာလဲ. . မင်း. . တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေး. . )
( ဆရာမသိပ်လှတာဘဲ. .)
( ငါကမင်းဆရာမကွ. . ဒီလိုလုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူး. .)
ဆရာမရဲ့မျက်လုံးတွေသည်တောင်မတ်နေတဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးပေါ်မှာစူးစူးစိုက်စိုက် ရောက်ရှိနေကြသည်. .။
( မင်းကိုဆရာမစာဆက်မသင်နိုင်တော့ဘူး. .မင်း.. မင်း. . နှာဘူးလေး. .)
( ဆရာမ.. ဆရာမ. . ဒီလို. . ဒီလို. . မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ. .)
( အို. . မကိုင်နဲ့. . မထိနဲ့. .)
( ကျနော်. . ဆရာမကိုအရမ်းချစ်တယ်ဗျာ. .)
( တော်. . မယုံဘူး. . မင်းချစ်တာကြီးကလဲရေချိုးတာချောင်းပြီး. . ဟိုဒင်းလုပ်နေတာ. .)
( ဒါကတော့ဆရာမကတအားလှ.. တအားဆောင့်နေတာကိုး. .) ဆရာမကိုသူတအားဖက်လိုက်သည်. .။
( လွှတ်.. ပေါ်ဦးထွန်း. . ငါ့ကိုလွှတ်. .)
( ဟင့်အင်း. . ဆရာမကိုသိပ်ချစ်တယ်. .)
( မဖြစ်နိုင်ပါဘူး. . ပေါ်ဦးထွန်း. . ကျောင်းသားတယောက်နဲ့ဆရာမဖြစ်ပျက်ရင်တသက်လုံး န့မည်ပျက်ကြီးနဲ့. .ဘ၀ပျက်ရော..)
( ဒါတွေမသိဘူးဗျာ. . ချစ်တာတခုဘဲသိတယ်. .)
ပေါ်ဦးထွန်းဆရာမကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားနေတော့သူ့လိင်တန်ကြီးဟာဆရာမ ၀မ်းပျင်သားကိုထိကပ်မိနေသည်. .။
ဆရာမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုသူစုတ်နမ်းသည်. .။ ဆရာမကခေါင်းကိုဘယ်ညာရမ်းခါပြီး.. ငြင်းဆန်လိုက်သည်. .။ ပေါ်ဦးထွန်းသည်ဆရာမကိုရအောင်ယူမည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ. . ။ဆရာမကိုအနားက ဆန်အိတ်ပုံပေါ်ကိုဆွဲလှဲချလိုက်ပြီးဆရာမရင်လျားထားတဲ့ထမိန်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲချွတ်ချပစ်လိုက် သည်။အို. .. ဆရာမဗလာကျင်းသွားသည်. .။
ဆရာမကိုယ်ကိုပေါ်ကူတက်ခွလိုက်ပြီးဆရာမပေါင်တန်တွေကိုသူကခြေထောက်တွေနဲ့ တွန်းခွဲလိုက်ပြီးဒူးထောက်ချကာဆရာမနို့တွေကိုဆုတ်နယ်ရင်းတချိန်ထဲမှာဘဲဆရာမရဲ့ပိပိ အကွဲကြောင်းထဲကိုသူ့လိင်တန်ကြီး. . ထိုးစိုက်ကာဖိသွင်းလိုက်ပါသည်. . ။ဆရာမပိပိသည် အရေတွေစိုနေသည်. . ။
စောစောကရေချိုးနေလို့ရေစိုနေတာမျိုးမဟုတ်.. ။ချွဲကျိကျိ . . တဏှာကာမေရှ့ပြေးစောက်ရေကြည်တွေဖြစ်ကြောင်းသူစမ်းကြည့်လိုက်လို့သိသည်. .။
( မင်း.. မင်း. . လူဆိုး. .. လူဆိုး. . )
ဆရာမသူ့ရင်ဘတ်ကိုသူမလက်သီးဆုတ်တွေနဲ့ထုရိုက်သည်. . ။အိ. .ဆရာမ .. နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေဖျတ်ကနဲဟသွားသည်. . ။ သူ့လိင်တန်ကြီးဆရာမပိပိထဲဗျစ်ကနဲတိုးဝင်သွားတာကြောင့်ပါ. . ။လှတဲ့လူတွေများကျ ဘာဖြစ်ဖြစ်လှနေတာပါလား။နှုတ်ခမ်းဟတတလေးတွေကိုသူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ငုံပြီး စုတ်လိုက်သည်. . ။
ဆရာမထုရိုက်နေတဲ့လက်သီးဆုတ်တွေငြိမ်ကျသွားသည်. . ။ဒီအချိန်မှာ ဆရာမကိုယ်ထဲုဝင်နေပြီးဖြစ်တဲ့သူ့လိင်တန်ကြီးဟာစပြီးလှုပ်ရှားနေပြီ. .။ ဆရာမရဲ့တင်းကျပ်လှတဲ့စောက်ပတ်ထဲကိုသူလိုးနေပြီ. . ။ဆရာမနှုတ်ကညည်းနေသည်. .။
( သူ.. ဆိုးတယ်ကွာ. .. သိပ်ဆိုတဲ့လူဆိုးလေး. .. နှာဘူးလေး. .).
လို့ညည်းရင်းသူ့ ကျောပြင်ကိုသိုင်းဖက်လာသည်. .။ အို. . ပေါ်ဦးထွန်းတအားဝမ်းသာသွားသည်. . ။ဆရာမ. . ဆရာမ.. သူ့ဖက်ကိုပါလာပြီ. ..။ အို. . ဆရာမရယ်. . . .။
ပေါ်ဦးထွန်းရဲ့တုတ်ခိုင်လှတဲ့လီးအကြီးစားကြီးသည်သူမစောက်ပတ်ထဲကိုစီးစီးကိုင်ကိုင်ာကီး ထိုးညှောင့်နေပါသည်။ ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်..( ၀သုန်) လိုးသွားပြီးကထဲကဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့မှထပ် မလိုးဖြစ်သေးလို့အမြဲပွစိပွစိနဲ့ယားလွန်းခဲ့ရတဲ့မိမိရဲ့စောက်ပတ်ထဲကိုပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့( လူနံပိန်ကျွဲချိုလိန်. .) လူပိန်သလောက်လီးကြီးတဲ့ကောင်လေးရဲ့စံချိန်မှီလီးကြီးက လိုးဆောင့်ပေးနေလို့မျက်ရေများစီးကျလာရတဲ့အထိကောင်းလွန်းတဲ့ကာမအရသာထူးကို ရရှိခံစားနေရပေသည်. .။
( အို. . ကောင်းလိုက်တာ. . . မောင်လေးရယ်. .)
( မမရယ်. . သိပ်လှတာဘဲဗျာ. . နောက်ပြီးတော့လေ. .)
( နောက်ပြီးတော့. . ဘာဖြစ်လဲ. .)
( မမစောက်ပတ်ကလိုးလို့လဲအရမ်းကောင်းတာဘဲ. .)
( အို. . နားရှက်စရာတွေကွယ်. .)
ဆရာမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုသူ့ပုခုံးပေါ်မတင်လိုက်ပြီးလီးတဆုံးအားနဲ့ထိုးဆောင့်ပေးရာ ဆရာမမှာအရသာထိမိလွန်းလို့ဖင်ကြီးတွေကိုကော့ကော့ပေးနေသည်. .။ လီးနဲ့စောက်ပတ်ဝင်ထွက်တိုင်း.. …ဖွတ်.. ဖီး. . ဖွတ်ဖီးနဲ့အသံထွက်သည်.. ။ ဆရာမရဲ့အင်. . ဟင်အင်. .ဟင်… နဲ့ညည်းသံလဲထွက်နေသည်. .။
( ကောင်းလားဟင်မမ. .)
( အင်း. .. အရမ်း.. အရမ်း. . ကောင်းတယ်. . )
နို့ကြီးတွေကိုစို့ပေးသည်. . ။တဖက်ပြီးတဖက်ပြောင်းစို့သည်. .။ သူ့အတွက်ဆရာမစောက်ပတ်ကျပ်ကျပ်ကလိုးလိုက်တိုင်းအရမ်းကောင်းနေတာကြောင့် ညပီးသွားမှာကိုစိုးလို့ပေါ်ဦးထွန်းသည်မပြီးအောင်စိတ်ကိုတခြားပို့ကာဆရာမအရင်ပြီးအောင် ထိန်းထားကာလိုးပေးနေသည်. . ။ဆရာမသည်တအားကြီးကောင်းလာပုံရပြိးသူမဖင်တွေကိုအောက်ကနေ ပင့်ပေးနေသည်. . ။
( မောင်လေး. . မြန်မြန်. .)
လို့ပြောလိုက်ရာ သူလဲလိုးအားအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ကာဒလစပ်လိုးဆောင့်လေသည်.. ။ဆရာမတအားအားနဲ့ ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘဲသူလဲသုတ်တွေပန်းထွက်ကာပြီးသွားရသည်. .။
( အိုး. . ဆရာမရယ်. . မမရယ်. . ကောင်းလိုက်တာဗျာ. . ကျေးဇူးဘဲ. .)
( အင်း. . မမလဲသိပ်ကောင်းတာဘဲကွာ. . မင်းကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်. .)
( ဘာလို့လဲ. .)
( လိုးပေးလို့. .)
လို့ပြောလိုက်ပြီးမျက်စောင်းလေး ထိုးလိုက်ပါသည်. . သူလဲဆရာမအဖုတ်ထဲကသူ့လီးကိုဆွဲထုတ်မယ်လုပ်သည်.. ။
( အို . . မထုတ်နဲ့. . မမ. . အထဲမှာဘဲထားပါ. . မင်းဟာကြီးကိုမမ
ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်ခုတလောဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်နဲ့ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးကျောင်းဆင်းရင်အတူတူပြန်ကြတာတွေ့နေရကထဲကခါတိုင်းလိုသူဆရာမ အနားကပ်ပြီးကြူလို့မရတော့တာကြောင့်စ်ိတ်ထဲတင်းနေသည်. .။
( မမ) လို့
( အော. . သူတို့ကဒီလိုတောင်ဖြစ်နေကြပါပြီကော) . . ဆိုပြီး. . ဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်နာကျင်ခံစားလိုက်ရသည်. . ။ပေါ်ဦးထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုလဲစိတ်ထဲ မနာလိုအရမ်းဖြစ်မိနေသည်.. ။
မုန်ယိုနေသောဆင်ရိုင်းကြီးတကောင်လိုဘဲဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်..ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် ကိုတအားစွဲလန်းကာမရ၇အောင်ယူလိုနေတာကြောင့်သူသည်..အများလေးစားခံရတဲ့..ကျောင်းဆရာတေ ယာက်ဆိုတာကိုတောင်သတိမမူမိတော့ဘဲ.. တနေ့ပေါ်ဦးထွန်းသူ့မိဘတွေနဲ့သူတို့မိဘတွေရဲ့ ဇာတိဖြစ်တဲ့တောင်တွင်းကြီးကိုသွားနေခိုက်. ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ကိုညနေ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာကြံစည်လေတော့သည်. .။
ဆရာမသောက်မဲ့ကော်ဖီထဲမှာသူသည်မူးယစ်ဆေးအပြားတပြားကို..ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ဆရာဆရာမများ.. နားနေခန်းထဲမှာဆေးအရှိန်တန်ခိုးပြပြီး မူးလာလေရာအကြံနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ဟာဆရာမကိုကူသလိုလိုနဲ့ ဖေးမသလိုလိုနဲ့ဖက်သိုင်းကာ. . အားကစားကရိယာတွေထားတဲ့စတိုခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်လာလေ သည်။
( မူးတယ်. . မူးတယ်. ..)
( ချစ်ချစ်. . ကျနော်ရှိတယ်. . ဘာမှမပူနဲ့. ..)
( အို. . ဆရာ. . ဆရာ. . ကူညီပါအုံးနော်. . အရမ်းမူးနေလို့. .)
( ကျနော်အိမ်လိုက်ပို့မယ်. . ဘာမှမပူနဲ့အခုတော့ခဏမှိန်းနေလိုက်အုံး. .)
ဆရာမကိုအနားကခုန်တန်းရှည်ပေါ်မှာလှဲနေစေပြီးဆရာမကျောလေးကိုပွတ်ပေးနေသည်. .။ ဆရာမလဲတအားမူးနေလို့တအင်းအင်းနဲ့ညည်းနေသည်. . ။ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်လဲစတိုခန်း တံခါးကိုအထဲကနေဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်. .။
( ဆရာမ. . ဆရာမ. .)
ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်အိပ်ပျော်နေပြီ. . ။ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်အမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားတော့သည်..။ ဆရာမရဲ့ထမိန်ကိုခါးအထိလှန်တင်လိုက်သည်. . ။ဆရာမရဲ့အဖြူရောင်အောက်ခံ ဘောင်းဘီလေးကိုလဲသူအမြန်ချွတ်သည်. . ။ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေကြားကအမွှေးရိပ်ထားလို့ ပြောင်ရှင်းခုံးမို့တဲ့စောက်ပတ်ကြီးကိုသူတွေ့လိုက်ရတော့မနေနိုင်တော့ဘဲကုန်းပြီးယက်လေ သည်… ။
ခဏကြာတော့သူသည်ဓါတ်ပုံရိုက်ထားရန်ကြိုတင်ကြံစည်ထားခဲ့တာကိုသတိရသွားပြီး သူ့တိုက်ပုံအင်္ကျီထဲကဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ကင်မရာလေးကိုနှိုက်ယူကာဆရာမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပုံပေါင်းများစွာစိတ်တိုင်းကျရိုက်ယူလေသည်. . ။အကြံတမျိုးထပ်ရသွားပြန်ပြီး. . ဆရာမမျက်နှာလေး နားကိုကပ်သွားပြန်ပြီး. . ဆရာမနှုတ်ခမ်းလေးနားမှာသူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုတေ့လိုက်ပြီးပုံတွေ ထပ်ရိုက်ပြန်သည်. .။
ပြီးတော့မှဆရာမရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပြန်မတင်ဝတ်ဆင်ပေး. . ထမိန်ကို သေသေသပ်သပ်ပြန်ဆွဲချပေးသည်. . ။စတိုခန်းတံခါးကိုပြန်ဖွင့်သည်. . ။ပြီးမှ ကျောင်းသန်ကရှင်းရေးလုပ်တဲ့ဒေါ်မိဆိုတဲ့ကုလားမကြီးကိုပြေးခေါ်သည်. . ။ဆရာမလဲနဲနဲ အမူးပြေလာပုံနဲ့လူးလွန့်လာသည်.. ။ဒေါ်မိကလဲဆရာမကိုမျက်နှာသုတ်ပုဝါရေဆွတ်ခါဆရာမ မျက်နှာကိုသုတ်ပေးသည်. . ။
( ဟင်. . ကျမ. . ကျမ. . မူးသွားတယ်ထင်တယ်. . အို. .)
ဆရာမခေါင်းထဲစူးကနဲကိုက်သွားလို့သူမခေါင်းကိုလက်နဲ့အုပ်ကိုင်လိုက်သည်. . ။ဒေါ်မိက. ဖေးမပေးထားသည်. . ။ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကကျနော်တက်စီကားသွားခေါ်အုံးမယ်ဆိုပြီး စတိုခန်းထဲကထွက်သွားသည်. .။
ဒေါ်မိနဲ့ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်တို့ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ကိုတက်စီကားနဲ့ အိမ်အထိပြန်လိုက်ပို့ပေးကြသည်. .. ။ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်သူမအပေါ်ယုတ်မာသော ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကိုသူမကိုစေတနာနဲ့ကူညီနေသူဆိုပြီးကျေးဇူးတွေတင်နေမိသည်. .။
ပေါ်ဦးထွန်းသည်ဆရာမနဲ့စာသင်ရင်းမမျှော်လင့်ဘဲဆရာမနဲ့ လိုးလိုက်ရတာတော်တော်ကျေနပ်နေပြီး.. အဲဒီနေ့ကစပြီးဆရာမနဲ့စာသင်တိုင်းထပ်ပြီးလိုးဖို့ကြိုး စားအားထုတ်လေတော့သည်. . ။သူ့အိမ်မှာစာသင်ရင်လဲအိမ်ဖေါ်ထမင်းချက်တွေရှိနေပေမဲ့သူ ကသူတို့စာသင်တဲ့အပေါ်ထပ်ကိုမခေါ်ဘဲမလာဖို့မှာထားလေသည်။ဒီနေ့ဆရာမသည် အရမ်းသွက်လက်ပေါ့ပါးနေသည်. . ။
ပေါ်ဦးထွန်းကိုလဲလှမ်းရိုက်လိုက်.. ဆွဲဆိတ်လိုက်နဲ့စသည် . . ။
( မောင်.. လူဆိုးလေး. ဟိူးတုံးထဲကမောင့်ကိုမမသတိထားမိတယ်. . သိလား. . မမဖင်တွေကို မင်းအရမ်းကြည့်တာဘဲ. . စားတော့ဝါးတော့မလိုမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့လေ. .ဟင်းဟင်း . . နှာဘူးလေး. .)
( မမဖင်တွေကတောင့်တာကိုး. . ဒီမှာကြည့်လေ. .)
ပေါ်ဦးထွန်း.. ဆရာမဖင်တွေကိုဆုတ်ကိုင်လေသည်. .။
( အို. . ဟိတ်. . နှာစိတ်ထလာပြီးစာမသင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်. .. )
ဆရာမပြောတာမှန်သည်. .။ ပေါ်ဦးထွန်းသည်စာမသင်နိုင်တော့. . ။ဆရာမကိုနမ်းနေသည်. . ။ဆရာမကလဲသူ့ကို. တုံ့ပြန်ပြီးနမ်းသည်. . ။အနမ်းတွေကစစချင်းတုံးကဖွဖွလေး. . ညင်ညင်သာသာလေး. .။ နောက်ပိုင်းမှာတဖြေးဖြေးနဲ့ကြမ်းလာသည်. .။ ပေါ်ဦးထွန်းလက်တွေကဆရာမတကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်နေသည်. .။
ဆရာမ အင်္ကျီကိုသူချွတ်သည်. . ။
( ဟိတ်. . ဒီမှာကြီးမကောင်းဘူးကွယ်. . လူတွေဝင်လာမယ်. .)
သူဆရာမကိုသူ့အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားသည်.. ။တံခါးကိုအတွင်းကနေဂျက်ချသည်. .။ ပေါ်သီးထွန်းကျောပေးကာရပ်နေတဲ့ဆရာမရဲ့ဆံပင်တွေကိုဘေးတဖက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီး.. .လည်ဂုတ်သား ဖွေးဖွေးလေးကိုနမ်းသည်. . ။ဆရာမမျက်တောင်တွေမှေးကျသွားသည်. . ။ပေါ်ဦးထွန်းဆရာမ အ၀တ်တွေကိုဖြေချွတ်နေသည်. . ။ဆရာမကသူ့ကိုကူညီပြီးချွတ်ပေးနေသည်. .။
ဆရာမရဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့တင်းမာပြီးကော့နေတဲ့နို့နှစ်လုံးကိုပေါ်ဦးထွန်းလှမ်းဟတ်လိုက် သည်။သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားထဲဆရာမနို့သီးနီနီလေးတဖက်ရောက်သွားသည်. . ။သူ စို့စုတ်လိုက်တော့ဆရာမခါးလေးကော့တက်လာသည်. . ။
( အို. . .. မောင်. .)
ပေါ်ဦးထွန်းသူ့လျာနဲ့ဆရာမနို့သီးအဖုလေးကိုဝေ့ဝိုက်ပြီးယက်နေသည်.. ။ဆရာမခေါင်းလေး မော့ကာညည်းနေသည်. . ။
( မောင်. . ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွာ. . .) တဲ့. .။
ပေါ်သီးထွန်း လက်တွေကဆရာမဖင်တုံးတွေကိုဆုတ်နယ်နေသည်. . ။ဖွဖွကိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး. .။ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆုတ်နယ်နေခြင်း. . ။ဆရာမကလဲပေါ်ဦးထွန်းရဲ့မတ်မတ်တောင်နေသော လိင်တန်လီးကြီးကိုတင်းတင်းကြီးဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်. .။ ပေါ်ဦးထွန်းလက်ချောင်းတွေကဆရာမရဲ့ဖင်ပေါက်ကိုထိုးနှိုက်ကလိနေသည်. . ။
( မောင်. .)
ပေါ်ဦးထွန်းသည်ဆရာမရဲ့နို့တွေကိုဆုတ်နယ်နေပြန်သည်. . ။
( ဘာလဲ. . မမ.)
( လုပ်တော့လေကွာ. . မမမနေနိုင်တော့ဘူး. . .)
( ဘယ်လိုမနေနိုင်တာလဲမမ. .)
( မမစောက်ပတ်ယားနေပြီ. . . လိုးပေးပါတော့. .)
ဆရာမရဲ့ဒီလိုပက်ပက်စက်စက်ပြောတာကိုကြားလိုက်မှပေါ်ဦးထွန်းရဲ့စိတ်တွေဟာ ထောင်းကနဲအဆုံးစွန်အထိကြွထသွားရပြီးဆရာမကိုကုတင်စောင်းမှာတွန်းလှဲလိုက်ပါသည်. .။
( မောင်. . အနောက်ကလုပ်မလို့လား. .)
( အင်း. . မမဖင်ကုန်းပေးနော်. . မောင်အနောက်ကနေလုပ်မယ်. .)
( မောင်. . ဖင်လိုးမလို့လား. . စောက်ပတ်ဘဲလိုးပါမောင်ရယ်. .)
( အင်းပါ. .)..
ပေါ်ဦးထွန်းသည်ဆရာမရဲ့ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေကုန်းလိုက်သောအခါပြူးထွက်လာတဲ့ဆရာမရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကိုမြင်ရသောအခါစိတ်တွေအရမ်းထန်သွားရပြီးသူ့လီးကြီးနဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြားကနှုတ်ခမ်းသားနှစ်မွှာကြားကိုတေ့ကာထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်. .။
( အာ. .. အ. . . .)
ပေါ်ဦးထွန်းရဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီး. . ဆရာမစောက်ခေါင်းထဲကိုတထစ်ထစ်နဲ့တိုးဝင်သွားသည်. .။ စောက်ခေါင်းနံရံတွေကိုပွတ်တိုက်ဝင်သွားတာကြောင့်ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်မှာဖင်တွေ ကော့ထောင်သွားရလောက်အောင်ဘဲကာမအတွေ့ထူးရရှိသွားရလေသည်. . ။
( မောင်ရယ်. . မောင့်ဟာကြီးကသိပ်ကြီးတာဘဲ. .)
ဆရာမပြောနေတုံးမှာဘဲပေါ်ဦးထွန်းရဲ့လီးကြီးက..ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဘဲ..လိုးဆောင့်လာပါတော့သည် . ..။
( အာ..အာ…အာ…အာ… အို့. . ကောင်း. . ကောင်းတယ်. . မောင်. . လိုး. .. လိုး. .)
ပေါ်ဦးထွန်းဆောင့်ပေးနေသည်. . ။ဆရာမလဲသူဆောင့်တာကိုသဘောကျလို့အောက်ကနေ ပြန်ပင့်ဆောင့်သည်။တက်ညီလက်ညီလိုးကြသောပွဲပါဘဲ. . ။လီးနဲ့စောက်ပတ်ဆုံတွေ့တိုင်း ဖွတ်ဖွတ်… ဖွတ်ဖွတ်နဲ့အသံတွေမြည်သည်. . ။ဆရာမခြေထောက်တွေကိုသူ့. ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ကာလိုးဆောင့်နေသောပေါ်ဦးထွန်းတကိုယ်လုံးချွေးတွေစိုရွှဲနေသည်. .။
( ကောင်းတယ်.. မောင်. . လိုး. . လိုး. . မမပြီးတော့မယ်. . လိုး. . လိုး. .)
( မမကြိုက်လား. .)
( အရမ်းကြိုက်တယ်. . မောင်လိုးတာမမအရမ်းကြိုက်တယ်. .)
ပေါ်ဦးထွန်းဆက်တိုက်ဒလစပ်ဆောင့်သည်. . ။အားကုန်ဆောင့်တာဖြစ်သည်. . ။အား. . အား. . နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူလိုပြီးသွားကြသည်. .။ ဆရာမတအင်အင်နဲ့ညည်းရင်းခွေလဲနေသည်. .။
ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်.. အိမ်ရောက်တော့တော်တော်နုံးနေသည်. . ။စိတ်ရှိလက်ရှိ လိုးခဲ့ကြတာမို့တော်တော်ပင်ပန်းသည်. . ။ပင်ပန်းပေမဲ့ပေါ်ဦးထွန်းရဲ့အလိုးကောင်းတာကိုသူမ. သဘောကျသည်. . ။လီးကလဲ( ရှယ်) ဘဲလေ. .။
( ဟင်.. ဘယ်ကများပါလိမ့်. . ..)
ချက်ချင်းဖေါက်ကြည့်လိုက်မိသည်.. ။စီဒီဒစ်စ်လေးတချပ်.. ။စာလေးကတစောင်. .။
“”သို့. . ဆရာမ. . ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်. . ယခုပူးတွဲပါစီဒီချပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ပါ. . ဒီပုံတွေကိုအင်တာနက်ကိုမတင်လိုက်စေချင်ရင်. .မနက်ဖန် ညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာ. . ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဟိုတယ်လ်ကိုတယောက်ထဲလာခဲ့ပါ..ရဲတိုင်တာတို့ တခြားလူနဲ့တိုင်ပင်တာတို့လုပ်ခဲ့ရင်အင်တာနက်ကိုတင်ပြီသာမှတ်. .။ ဆရာမဆီကလိုတာရပြီးရင်အားလုံးပြန်ပေးမယ်. . ဆရာမကိုလိုးချင်သူ…။””
ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်မျက်လုံးတွေပြာသွားသည်. . ။ဘာပုံတွေလဲ. . ။ပေါ်ဦးထွန်းနဲ့ လိုးတာတွေများတယောက်ယောက်ရသွားပြီလား. .. ။အမြန်ဆုံးကွန်ပြူတာဆီကိုပြေးသည်. .။ စီဒီကိုဖွင့်ကြည့်သည်. . ။အို. . ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပါလား. . ။အို. . လီးကြီးတချောင်းကို ပါးစပ်နားတေ့ပြီးရိုက်ထားတာပါလား. . ။ဘယ်လိုဒီပုံတွေရိုက်သွားလဲ. . ။သူမသည်ပုံများမှာ မျက်လုံးပိတ်ထားနေသည်. . ။
လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ပုလဲပုတီးကိုကြည့်ပြီးသူမမူးလဲတဲ့ နေ့ကဆိုတာသတိထားမိ.. မှတ်မိလာသည်.. ။ပုလဲပုတိးကိုနေ့တိုင်းသူမမဆွဲ.. ။မူးလဲတဲ့နေ့ ကဆွဲတာသူမမှတ်မိပြီ. .။ အို.. ဒါဆို. . ဒါဆို. . . ဒါတွေရိုက်တာ. . ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်လား. . ။အို. .ယုတ်မာလိုက်တာ . . ကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီးတော်တော်ယုတ်မာတဲ့ကောင်ကြီးပါလား. . ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ. .။ ပေါ်ဦးထွန်းကိုပြောရင်ကောင်းမလား. ..။ ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့.. ။တညလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ကာအိပ် လို့မပျော်။ေ
နောက်တနေ့သူမကျောင်းကိုဖုန်းဆက်သည်. . ။နှစ်ခါဆက်သည်.. ။ပထမတခါ ကကျောင်းအုပ်ကြီးဆီကိုခွင့်တိုင်တာ.. ။နေမကောင်းလို့မလာနိုင်တဲ့အကြောင်း. ။နောက်တခါ ကဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ဆီကို. .။ ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်သူမဆက်တာသိသောအခါတော်တော်အံ့သြသွားသည်. .။
( ဒီမှာဆရာ. . ရှင်လုပ်ရက်တယ်. .. ကျမကိုရှင်ဘဲလုပ်မယ်ဆိုတာသိနေတယ်. .ဒီတော့ . . ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမှာတော့မတွေ့နိုင်ဘူး. .. ဖါသည်တွေပျော်ပါးတဲ့ဟိုတယ်လ်လိုနေရာမှာကျမ. မတွေ့ချင်ဘူး. . ရှင့်အိမ်မှာတွေ့လို့ရမလား. .)
( အာ. . ရတယ်လေ. . ချစ်ချစ်တွေ့ချင်ရင်ရတာပေါ့. .. အခုဘဲကျနော်လဲခွင့်နေ့ဝက်ယူပြီးအိမ်က .. စောင့်မယ်.. လာခဲ့မလား. .)
( ကောင်းပြီလေ. . စောင့်နေ. . .)
ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ခပ်နွမ်းနွမ်း..တပတ်ရစ်..အ၀တ်အစားတွေ..ကိုဝတ်ခါ….လက်ကိုင်အိတ်ထဲ မှာသားလှီးဒါးတချောင်းထည့်ပြီးဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ရဲ့အိမ်ကိုအငှားကားနဲ့သွားပါသည်. .။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လူယုတ်မာကိုသုတ်သင်ပစ်မယ်လို့မှန်းထားသည်. . ။ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သူ့အိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့သောဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင် သည်လိုးရတော့မည်ဆိုပြီး. . အလွန်ဘဲဝမ်းသာတဲ့ပုံနဲ့ဆီးကြိုနေပေသည်.. ။
( အော်. . ဆရာမရယ်. . ဟဲဟဲ. . . လာ. . လာ. .. )
( ကဲ. . ဆရာ. . ရှင်. . နဲကကျမစာရင်းရှင်းရအောင်. . .)
( စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာမရယ်. . . ကျနော်ကဆရာမကိုကြိုက်နေတာကြာပါပြီ. . ဆရာမကဟို ကျောင်းသားနဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျနော်လဲကြံမိကြံရာလုပ်မိတာပါ. . ဆရာမကိုလက်ထပ်ယူဆို ယူမှာပါ. .)
( တော်စမ်းပါရှင်. . ရှင့်လိုလူယုတ်မာနဲ့ဘယ်သူကယူမလဲ. . ကဲ. .)
( ဆရာမ.. အချိန်မရှိဘူး. . လိုးကြရအောင်. .)
( ရှင်မိုက်ရိုင်းလှချည်လား. .)
( လာစမ်းပါ. . မင်း. . ပေါ်ဦးထွန်းနဲ့လိုးနေတာမသိဘူးထင်လို့လား. .)
ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကဆရာမကိုဆွဲဖက်ပြီးကုတင်ပေါ်ကိုဆွဲမှောက်လိုက်သည်. . ။ဆရာမလဲ သူကနိုင်ကွက်ကိုင်ထားပြီမို့မထူးတော့တာနဲ့ဒင်းကိုကျိတ်မှိတ်ပြီးလိုတာပေးလိုက်တော့မည်လို့ ဆုံးဖြတ်ခါ.. ငြိမ်နေလိုက်သည်. . ။
သူ့ဆီကသူမပုံတွေပြန်ရမှဒင်းကိုဒါးနဲ့ထိုးသတ်ပစ်မည်လို့ တွေးနေသည်. .။ ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကဆရာမထမိန်ကိုခါးထိအောင်လှန်တင်လိုက်သည်. . ။ပင်တီဘောင်းဘီ အပြာရောင်လေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်. . ။ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေကိုမြင်တော့ဖန်းကနဲလက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး.
( ဖင်ကြီးတွေလှလိုက်တာဆရာမရယ်. .)
လို့ပြောရင်း. . ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ. . ဆရာမပေါင်တန်တွေကိုဆွဲကားလိုက်ပြီးဖင်တုံးတွေအောက်ကပြူးထွက်နေတဲ့ဆရာမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုသူ့လျာကြီးနဲ့အောက်ကနေပင့်ယက်လိုက်သည်. .။
အို. . မထင်မမှတ်ဘဲစောက်ဖုတ်အယက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဆရာမတုန်သွားသည်. .။ ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ရဲ့လျာကြီးကစုံချီဆန်ချီသူမစောက်ဖုတ်ကိုယက်နေပါပြီ. . ။သူမစောက်စိ ကိုသူ့လျာကြီးကဖိဖွိတ်တိုက်နေသည်. . ။တကိုယ်လုံးတုန်ရီနေအောင်ဘဲကာမအရသာက ထူးကဲလှသည်. . ။
ဟာ. . ဒီလူ. .. အို. . သူမဖင်စအိုပေါက်လေးကိုသူ့လျာကီးနဲက ယက်ပေးနေပြန်သည်. . ။အို. . အဟင့်. . သူ. . သူ. . လျာထိပ်ကိုချွန်ပြီးသူမဖင်ပေါက်လေးထဲကို ထိုးနေသည်။
( ဆရာမ. .)
( ဘာ.. ဘာလဲ. ..)
( ဆရာမဖင်ပေါက်လေးကအလိုးမခံဘူးသေးဘူးမဟုတ်လား. .)
( အို.. ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ. .)
ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ကဖင်ပေါက်လေးကိုလျာကြီးနဲ့ဆက်ကလိနေပြန်သည်. .။ ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်မှာတအင်းအင်းနဲ့ကုတင်ပေါ်ဖင်ထောင်မှောက်ရင်း. . သူယက်ပေးသမျှ ကာမအရသာတွေထူးကဲနေသည်. . ။တော်တော်ကြယက်ပေးတော့ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် အရမ်းစိတ်တွေထလာသည်. . ။ခံချင်စိတ်တွေထိန်းမရချင်တော့. .။
သူမဖင်နဲ့စောက်ဖုတ်ကိုယက်နေတာရပ်သွားသည်. . ။အီး. .. သူ. . သူ့လီးကြီးစောက်ဖုတ်ထဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးထိုးထည့်တာခံလိုက်ရလို့လန့်သွားသည်.။ ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ရဲ့ခါးလေးကိုစုံဆွဲကိုင်ပြီးလီးကြီးအဆုံးအထိ ထိုးသွင်းလိုက်ပါသည်. . ။
အား. . . …. အိုနဲတဲ့လီးကြီးမဟုတ်ဘူး. . သူမစောက်ပတ်ထဲမှာတင်းပြည့်နေသည်. .။
( ဆရာမရယ်. . စောက်ပတ်လေးကကျပ်နေတာဘဲဗျာ. . ကောင်းလိုက်တာ. . )
( လျာမရှည်နဲ့ရှင်. . လုပ်မှာဖြင့်လုပ်. .)
( ဟဲဟဲ. .လုပ်မှာ.. လုပ်မှာ. . ဆရာမလိုသလိုပြောနော်. .)
သူ. . သူလိုးပါပြီ.. ။ဆရာမသည်သူလိုးတာတွေကကောင်းလွန်းလို့. . တအီအီနဲ့ညည်းနေပြီး. ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးအလိုးခံနေမိသည်. . ။ဆောင့်အားကကောင်းလှသည်. . ။ဆရာမကြိုက်သွားပြီ။
( ကဲပုံစံပြောင်းရအောင်. . ချစ်ချစ်. .)
သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးရင်းဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်သည်. . ။အို. .သူ . . သူသိပ်လိုးတတ်တာဘဲ. . ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်ပေါ်ဦးထွန်းလိုလူငယ်ကျောင်းသားလေးထက် အတွေ့အကြုံကပိုများပြီး.. ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်စွဲသွားရလေအောင်ကောင်းကောင်းလိုးပေး လေပြီ. . ။
လိုးလိုက်တာများ. . ဒလစပ်. . ။အရေတွေကရွှဲနေတာကြောင့်လိုးဆောင့်တိုင်း ဖွတ်ဖပ်.. ဖွတ်ဖပ်အသံတွေညံနေသည်. .။ ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်စိတ်ပါလာပြီးအောက်မှပြန်ပင့်ကော့ဆောင့်နေမိပြီ. .။
( ကောင်းလား. . ချစ်ချစ်. .)
( အင်း. .)
( ပြီးခါနီးရင်ပြောနော်. . ချစ်ချစ်ပြီးအောင်ကိုယ်လိုးပေးမယ်. .)
( ပြိုင်တူပြီးရအောင်. .) လို့ခပ်တိုးတိုးပြောရင်း ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်ရဲ့ကျောပြင်ကြီးကို..တအားဖက်ထားလိုက်ပြီးအောက်မှ..စကောဝိုင်းမွှေ့ရမ်းပေးနေလေ တော့သည်. ..။
မြစ်ငယ်မှာအလစ်တွယ်တဲ့ ချစ်ဖွယ် ရေးသည်။
ကိုကို နဲ့ ထွေးထွေး